Madagascar Matin » Antsohihy – Mpangalatra finday maty voakapan’ny antsy lava
Vao tamin’ny herinandro lasa teo izay no nisy tovolahy 17 taona monja matin’ny fitsaram-bahoaka noho ny halatra finday dia izao nisy tratra izao koa tany Antsohihy. Tovolahy iray izay mbola tena tanora tokoa no maty tany amin’ny hopitaly vokatry ny kapoka nahazo azy. Raha ny loharanom-baovao dia mpanendaka ity tovolahy ity. Lehilahy iray sendra nandeha teny an-dalana no nisy naka tampoka ny finday teny aminy. Tsy nanaiky lembenana ny tenany ka nenjehiny avy hatrany ilay mpangalatra. Nentin-kafanam-po be loatra sy hatezerana ity nanenjika ka rehefa tratrany ilay jiolahy dia nofirainy tamin’ny antsy lava lela ny lohany nakany ilay finday teny an-tanany. Tao Ampandriakilandy, ao anatin’ny Distrikan’Antsohihy no niseho ny tantara. Finday iray no namoizana aina. Nandriaka ny ra sady mafy ny ratra nahazo ka rehefa notazonina iray andro tao amin’ny toeram-pitsaboana dia tsy tana intsony ny ainy, ny alatsinainy maraina rehefa nialana nenina. Ny olona teo amin’ny manodidina no nitondra ity naratra nankany amin’ny hôpitaly. Mazava hoazy fa na inona antony na inona antony dia heloka eo anatrehan’ny fitsarana ny famonoana olona. Tsy azo lazaina ho fiarovan-tena anefa no nataon’ity lehilahy nikapa antsy azy ity raha ny fizotran’ny tantara ka dia efa nandray ny andraikiny ny Zandary tao Antsohihy ary nisambotra ilay nahavanon-doza.